कोभिडको दोस्रो लहरमा वीपीमा २० जना संक्रमितको जटिल शल्यक्रिया
प्रकाशित: असार २, २०७८ / 1,102 पटक पढिएको
धरान: विश्वव्यापी कोभिड १९ महामारीको दोस्रो लहर शुरु भए यता वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा २० जना संक्रमितकको शल्यक्रिया भएको छ ।
कोभिडको दोस्रो लहर शुरु भएयता एक महिनाको अवधिमा २० जनाको शल्यक्रिया गरिएको प्रतिष्ठानले जानकारी दिएको छ । दोस्रो लहर शुरु भएयता गत बैशाख २७ गतेदेखि कोभिड अस्पतालमा शल्यक्रिया शुरु गरिएको थियो । जेष्ठ अन्तिमसम्म २० वटा शल्यक्रिया भएको सहप्रवक्ता डा.चुडामणी पोखरेलले जानकारी दिए । प्रतिष्ठानका अनुसार ती शल्यक्रियाहरु अधिकांश जटिल किसिमका थिए । ती मध्ये अधिकांश जटिल शल्यक्रियाहरु उपत्यका बाहिर वीपी प्रतिष्ठानमा मात्र भएको हो । यो सेवाले कोभिडका विरामीहरुलाई धेरै लाभ पुगेको प्रतिष्ठानको भनाई छ ।
प्रतिष्ठानका न्यूरो सर्जन डा.आलोक दाहाल लगायतको टिमले ३ वटा न्यूरो सम्बन्धि जटिल शल्यक्रिया गरेको छ । उनको टिमले अचेत अवस्थामा आएका, आँखा खोल्न नसकेका, टाउकोमा रगत जमेका र हातखुट्टा नचलेका विरामीहरुको सफल शल्यक्रिया गरेको छ । यस्तै, जनरल सर्जरीबाट प्रा.डा. राकेश गुप्ता, डा.सुरेश प्रसाद साह, डा निर्मल साह, डा.रुपेश प्रसाद साह, डा. भवानी खनाल, डा. विजय श्रेष्ठ लगायतको चिकित्सक टोलीले ७ वटा जटिल किसिमका शल्यक्रियाहरु गरेका छन् । शल्यक्रियाको क्रममा ४ वटा सानो आन्द्राको शल्यक्रिया, २ वटा एपेन्डिक्सको शल्यक्रिया र १ वटा ठुलो आन्द्राको शल्यक्रिया भएको सहप्रवक्ता डा.पोखरेलले जानकारी दिए ।
प्रतिष्ठानमा १२ इन्च लामो रडले करङको हाडलाई छेडेर फोक्सो र मुटुमा चोट पु¥याएका संक्रमित विरामीको पनि जटिल शल्यक्रिया गरिएको थियो । कार्डियो भास्कुलर सर्जन डा. लोकेश शेखर जैसवाल तथा जेनेरल सर्जन डा. सुरेश प्रसाद साहको टोलीले उक्त जटिल शल्यक्रिया गरेको थियो । त्यसैगरी प्रतिष्ठानको नाक, कान, घांटी विभागका डा. शंकर प्रसाद साह र डा. ऋषिराज साहको टोलीले एक संक्रमित विरामीको घाँटीमा अड्किएको हड्डी सफलतापुर्वक निकालेको प्रतिष्ठानले जनाउको छ ।
यसैगरि, गाइनो विभागका चिकित्सकहरुले संक्रमित विरामीहरुको ८ वटा शल्यक्रिया मार्फत डेलिभरी गरएिको थियो भने ९ वटा नर्मल डेलिभरी गरिएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ । ती मध्ये ५ वटा शल्यक्रिया डा.दिप्ती दासले, २ वटा मदन खड्का र एउटा डा.मनोज साहले गरेका थिए । ती सम्पुर्ण शल्यक्रियाहरु सम्पन्न गर्न एनेस्थेसिया विभागका चिकित्सक, नर्सिङ कर्मचारी र हेल्परहरुको पनि सहभागिता रहेको सहप्रवक्ता डा.पोखरेलले जानकारी दिए ।
यो पनि: कोखाबाट १२ इञ्च रड छिरेर गम्भीर घाइते भएका संक्रमितको वीपीमा जटिल शल्यक्रिया, उपचार पश्चात डिस्चार्ज